Noocyada Hormarinta Shirkadda Dhulka, Dheefaha, Qiimaha Wadarta
Meelaha ugu sareeya ee Shirkadda Shirkadda Sharciga ah ee Soomaliya
Kuwa soo socda waa qaybta shirkadaha ka baxsan ee bixiya bixinta ilaalinta hantida, ilaalinta dacwada iyo asturnaanta. Waxaad sidoo kale arki kartaa isbarbar dhiga loogu talagalay LLC-ga offshore adoo gujinaya tiirkan.
Nevis - Asturnaanta, Helitaanka iyo Xasilinta. Baro sababta jasiiradda Nevis ay tahay mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee jaangooyooyinka maanta. Dhanka kale, hubi qalabka ugu caansan ee badda: Nevis LLC.
Belize - Shirkadaha, IBC (Shirkadda Ganacsiga Caalamiga ah) iyo Banking. Intaa waxaa dheer, waxaad arki doontaa in Belize ay bixiso kala duwan oo kala duwan oo ka mid ah xulashooyinka dhexdhexaadka ah. Tusaale ahaan, Belize LDC, Bedelkii Belize ee LLC wuxuu bixiyaa faa'iidooyin badbaadin khaas ah.
Bahamas - Canshuurta Bilaashka ah, Qarsoodiga iyo Kharashyada Dheeraadka Intaas waxaa dheer, waxaad ka akhrisan kartaa fursadaha kala duwan ee aad heli kartid Bahamas.
British Virgin Islands - Badbaadada Badbaadada, Ilaalinta Hantida iyo Qarsoodiga. Intaa waxaa dheer, waxaad ka baari kartaa sida shirkadaha offshore iyo IBC ee BVI ka caawiyaan ilaalinta hantidaada.
Halkan riix halkan si aad u hesho liis dhamaystiran: Xudduudaha shirkadda ee shirkadda.
Macluumaadka Shirkadda Offshore
Shirkadaha Offshore waa shirkado sida shirkado ama shirkado xaddidan oo xadidan (LLCs) kuwaas oo ah laga soo diray meel ka baxsan waddanka uu degan yahay. Dadka ku jira shirkadaha shisheeye waxay sidaas sameeyaan, waxyaabo kale, marka ay xiiseynayaan ilaalinta hantida, ballaarinta ganacsiga iyo asturnaanta maaliyadeed. Intaas waxaa dheer, macluumaadka hoos ku qoran ayaa soo koobaya sababaha ay dadku u samaysteen hay'adahan:
Kaydinta Canshuurta (ku xiran tahay awooddaada)
Shuruudaha Ganacsi ee Sareeya
Dhaqaalaha Caalamiga ah ee Dhaqaalaha
Istaraatijiyada Dejinta Shirkadda Dhulka
Halkan, waxaad arki doontaa liiska dhowr degaan oo ka baxsan xeeladaha ilaalinta hantida, kharashkooda iyo faa'iidooyinkooda. Intaas waxaa sii dheer, qaybtaani waxay ka hadlaysaa dhinacyada muhiimka ah ee qorshaynta dibadda, oo ay ka mid yihiin shirkadaha, bangiyada badda iyo sugida, sida ay u dhisan yihiin iyo sababta. Muhiimad ahaan, waxaan sameyn karnaa xisaab bangi oo shirkad walba ah oo aad ku dhisto adeegaaga. Intaa waxaa dheer, waxaad awoodi kartaa wax ka barto bangiga badda halkan.
First, dhulal badan oo dhul-gariirka waxay leeyihiin nidaam sharci ah oo faa'iido leh oo loogu talagalay dadka raadinaya ilaalin hantiyeed iyo maaliyadeed. Ka fikir kuwaan faa'iidooyinka ka dhasha shirkadaha dibadda iyo xaqiiqooyin. Waxaa muhiim ah, Maraykanku wuxuu leeyahay 4.4% dadka adduunka, haddana 70% qareenada aduunka iyo 96% dacwadaha aduunka. Waxaa intaa dheer, ka duwan dalalka kale ee adduunka, ma haysanno guuldaro bixisa nidaamka sharciga. Taa beddelkeeda, wadamada kale khasaaruhu waa inuu bixiyaa khidmaddiisa qareenkiisa iyo kuwa ka soo horjeeda. Sidaas daraadeed, sharciyadooda ayaa ka dhigaya dacwooyin waxoogaa ka badan.
Mareykanka haddii aad ku lug leedahay dacwad oo aad ku guuleysato, waxaad weli ka baxaysaa qarashaadka sharciga ah, sidaas darteed waad waayi doontaa. Dhanka kale, Dacwad oogista shirkadda xeebaha waa mid aad u adag. Tusaale ahaan, aan dhahno qof ka soo horjeeda sharciga ah ayaa doortay in uu dacwo shirkadda xeebta. Isaga ama ayada waxaa laga yaabaa inay ku dhejiyaan dammaanad ah inay kiiska kuusoo gudbiyaan guddiga dib u eegista. Waxay, markaa, waxay go'aamiyaan in kiisku xitaa u dhigi doono maxkamad. Badanaa, curaarta lama soo celin karo. Natiijo ahaan, dad badani ma dacweeyaan. Sidaa daraadeed, tani waa lakab xoog leh ee ilaalinta dacwada. Si kale haddii loo dhigo, kaliya adigoo ka faa'iideysanaya qawaaniinta sharci ee sharci-darrada ah ee aad u leedahay waxaad hoos u dhigeysaa khatarta qof kuu dammaanad qaadaya.
Iyadoo Nevis LLC, tusaale ahaan, isbedelka 2015 Dammiile ka dhigay inuu dhajiyo bond $ 100,000 ka hor intaanay keenin wax talaabo ah oo ay ku soo aruurinayaan xukun ka soo horjeeda xubin shirkad. Xildhibaannada Nevis waxay hagaajiyeen qawaaniinta 2018 iyagoo siinaya Maxkamadaha Nevis awoodda ay u dejinayaan curaarta qadar kasta. Lacagta lagu badbaadiyay adigoo dhaqaalahaaga ka ilaalinaya indhaha indhaha, sidaas darteed, ka hortagga dacwooyinka, ilaalinta hantidaada maxkamadaynta iyo korodhka maaliyadeed ee kordhay ayaa ah qaar ka mid ah sababaha badan ee ku baxaya dhul xeebeedka. Hay'ad kale oo ka faa'iideysan karta LLCs waa jasiiradaha Cook. Dhab ahaan, waxaad akhrin kartaa maqaalkan Nevis LLC vs. Cook Islands LLC taas oo isbarbardhigaysa labada hay'adood.
Noocyada Shirkadaha Dabka
Qodob kale oo muhiim ah ayaa ah Shirkadaha gidaarka waxay bixiyaan sir badan maaliyadeed marka loo eego hoyga noocyada. Tusaalooyinka kuwan waxaa ka mid ah shirkadaha, shirkadaha xaddidan ee xadidan ama shirkadaha ganacsiga ee caalamiga ah (IBCs). Waxaa jira xukuno badan oo ka baxsan dhul-gariirka in shuruucda waxtar leh ee Maraykanka, Kanada ama UK. Xuduudahaani waxay ku tartamaan macaamiisha caalamiga ah. Sidaa darteed, sharciyadooda u haqab-tiri asturnaanta lahaanshaha, asturnaanta loogu talagalay saraakiisha iyo agaasimayaasha iyo aqoonsiga aan shisheeye ahayn xukunnada.
Sida la arki karo, khilaafka dacwaddan oo dhaleecaynaya milkiilaha ganacsiga Maraykanka waa mid sareeya. Kadib, qareeno badan ayaa qiray inay uun badbaadayaan. Dhab ahaan, qaar ka mid ah marnaba arag gudaha gudaha qolka dhegaysiga. Taasi waa, waxay isticmaalaan nidaamka sharciga si loo cadaadiyo hoggaamiyayaasha ganacsiga inay ku noqdaan degaan aan macquul ahayn. Waxaad wax badan ka baran kartaa sida shirkadda offshore dhexgalka wuxuu kaa caawin karaa baahidaada badbaadada adoo wacaya OffshoreCompany.com ama by buuxinta foomka boggan. Waxaan samaynaa kumanaan sanadood oo ganacsi ah, ka caawinta kumanaan qof oo Mareykan ah oo leh baahidooda ilaalin iyo qarsoodi ah waxayna bixiyaan hagid iyaga oo kaashanaya shirkadaha badaha nidaamyada.